July 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
“ဘီလျံနာသူဋ္ဌေးကြီး လီကာရှင်းရဲ့ တန်ဖိုးရှိသော စကားများ”
သူ့မိသားစုဟာ စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ တရုတ်ပြည်ကနေ ဟောင်ကောင်ကျွန်းကို ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ ဟောင်ကောင်ရောက်ပြီး သိတ်မကြာခင်မှာပဲ သူ့အဖေဟာ တီဘီရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အသက် ၁၄ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သားအကြီးဆုံးဖြစ်တာမို့ မိသားစုတာဝန်ယူဖို့ ကျောင်းက ထွက်ပြီး ပလတ်စတစ်စက်ရုံတခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ နောက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် လုပ်တယ်။ တနေ့ကို ၁၆ နာရီအထိ အလုပ်လုပ်တယ်။ လူပျိုဖြစ်လာတော့ သူများတွေလို မပျော်နိုင်ဘူး။ အလုပ်ပဲလုပ်ရင်း ပိုက်ဆံစုတယ်။ စုလို့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့ ပလတ်စတစ်စက်ရုံလေး ထောင်လိုက်တယ်။ တနေ့မှာ အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းတစောင်က သတင်းတိုလေးတပုဒ်ကို ဖတ်မိရင်း အကြံတခု ရလိုက်တယ်။ အဲဒီအကြံကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရင်း ကြီးပွားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ တွေ့လာတယ်။ အဲဒီအခွင့်အလမ်းတွေကို အသုံးချပြီး သူဟာ ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံ ပိုင်ဆိုင်နေပြီး […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 31/07/2018
“တန်ဖိုး ( Price and Value)”
တစ်ခါတုန်းက ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီဆရာကြီး ပီကာဆို ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရဲ့ လမ်းမကြီးဘေးနားက ကဖီးဆိုင်တစ်ခုမှာ ပန်းချီဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူဟာ ပုံတစ်ပုံဆွဲဖို့ ပုံကြမ်းရေးခြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဖီးဆိုင်ကို လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပီကာဆိုကို တွေ့သွားတယ် ။ အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာ လမ်းဘေးက ပုံတူဆွဲတဲ့ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်လို့ပဲ ထင်ဟန်တူပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူ့ဖို့ပုံတူဆွဲပေးဖို့ ပြောပါတယ် ။ ပီကာဆိုကလည်း သဘောတူခဲ့တယ် ။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အမျိုးသမီးရဲ့ပုံတူကို ပန်းချီဆွဲလို့ပြီးသွားခဲ့တယ် ။ သဘောကျသွားတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးက ပီကာဆို ကိုမေးတယ် ။ “ ပန်းချီဆရာရှင့် ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ ” ဒီတော့ ပီကာဆိုက လေအေးအေးလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ် ။ “ ငါးထောင်ကျပါတယ် ” အမျိုးသမီးက […]
“ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ဘယ်သူခံရမလဲ…? “
တစ်​ခါကရွာတစ်​ရွာမှာ အလွန်​သ​ဘော​ကောင်းတဲ့​ တောင်​သူကြီးတစ်​​ယောက်​ရှိပါတယ်​။ သူဟာလူတစ်​ဖက်​သားကိုလည်း အလွန်​သနားတတ်​ပါသတဲ့။တစ်​​နေ့​တော့​ ​နေစရာထိုင်​စရာမရှိလို့..​ ယောင်​ချာချာဖြစ်​​နေတဲ့ လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​ကို ခေါ်လာပြီးသူ့ယာတဲ​လေးမှာ​ နေထိုင်​ခွင့်​​ပေး ထားပါသတဲ့။ဆန်​နဲ့ဆီ၊ ဟင်းချက်​စရာ တို့တို့တိတိ​တွေကိုလည်း တစ်​လစာ​လောက်​​ ပေးလိုက်​ပါ​သေးတယ်​။ ​နေစရာတဲ​လေးကလည်း အဆင်​သင့်​ပါပဲ။ တစ်​ဧက​ကျော်​​လောက်​ရှိတဲ့ ယာကွက်​ထဲမှာ သီးနှံ​လေး​တွေကိုလည်း စိုက်​ခွင့်​​ပေးပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့.. သူ့ရဲ့အိုစာမင်းစာအတွက်​ဆိုပြီး စိန်​တလုံးသရက်​ပင်​၊သံပုရာပင်​နဲ့ ပိန္နဲပင်​လို နှစ်​ရှည်​ပင်​အချို့ကိုစိုက်​ခိုင်းပါသတဲ့။ ဘူး၊ဖရုံငရုတ်​၊ငခွားပင်​​တွေကို​တော့ သူတို့ဖာသာစိုက်​ပြီး​ ရောင်းချစား​စေပါတယ်​။ ဒီလိုနဲ့.. ​လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​ဟာ ပြင်​ပကအလုပ်​​လေး​တွေလုပ်​ရင်း ယာကထွက်​တဲ့သီးနှံ​လေး​တွေ​ ရောင်းရင်း စီးပွား​ရေး​လေးအဆင်​​ပြေလာပါတယ်​။လင်​မယား​လေးနှစ်​​ယောက်​ဟာ… သူတို့ရဲ့​ကျေးဇူးရှင်​​တောင်​သူကြီးကို ဝါဝင်​ဝါထွက်​တိုင်းကန်​​တော့တဲ့အပြင်​.. ဟင်း​လေး​တွေ​ကောင်းရင်​လည်း ဦးဦးဖျားဖျားပို့ပါတယ်​။ စိန်​တစ်​လုံးသရက်​​တွေလည်းသီးလို့ သံပုရာသီး​တွေလည်း​ဝေလို့ ​နေချင့်​စဖွယ်​ယာတဲ​လေး ဖြစ်​လာပါတယ်​။ ​တောင်​သူကြီးနဲ့သူတို့လင်​မယားဟာလည်း သားအဖ​တွေသဖွယ်​ချစ်​ခင်​လာကြပါသတဲ့။ တစ်​​နေ့​တော့ ​တောင်​သူကြီးဟာ သူတို့လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​ကို​ခေါ်ပြီး “မင်းတို့လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​လည်း ငါ့ယာတဲလေးမှာ​နေတာ.၅.နှစ်​ရှိပြီ။ မင်းတို့စီးပွား​ရေး​လေး လည်းအဆင်​​ပြေပြီမို့.. ငါလည်းအသက်​ကကြီး..​ ငွေလည်းလို​နေလို့ ငါ့​ယာတော​လေးကို​ရောင်း​တော့မယ်​ […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 31/07/2018
“လူတိုင်းအတွက်အချက် ၅ ချက် “
1. Let it go ဘ၀မှာပြီးခဲ့တဲ့ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ထားခဲ့လိုက်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်း အရာကိစ္စပ်ါမှာ သွားခင်တွယ်မနေနဲ့ အဲဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီ အတိတ်မှာပဲ ပစ်ထားခဲ့လိုက်ပါ။ ရောက်လာမဲ့ အနာဂတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် တို့တွေ အတွက်ပစ္စုပ္ပန်အနေနဲ့ ရှိနေရမှာ နာရီလည်တဲ့ စက္ကန့်တိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပဲ ခင်တွယ်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လူ့ဘ၀မှာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အသက်ရှုနေတာပဲရှိလိမ့်မယ်။ ဘ၀ဆိုတဲ့လမ်းခရီးကိုအသုံးမချသူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ 2. Getamove on ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းပါ။ဘယ်အရာနဲ့ဘယ်လိုပင်ကြုံတွေ့နေပါစေ စိတ်ပျက်မှု့၊ နာကျင်မှု့၊ဆုံးရှုံးမှု့ ဘယ်လိုပင်ကြုံတွေ့နေပါစေ ချက်ချင်းရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရမယ်။အချိန်မကုန်စေနဲ့ ဘယ်အရာမှ ကရုမစိုက်ပဲ ကိုယ့်ဘ၀မှာလိုချင်တဲ့ အရာဆီ ဦးတည်ပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းပါ။ ကိုယ်သာ အမှန်တစ်ကယ်လိုချင်ရင် ဘယ်အရာမှ တားဆီးပိတ်ပင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ 3. Follow your heart နှလုံးသားကတောင်းဆိုချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ချင်လဲ? ဘယ်သွားချင်လဲ? […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 30/07/2018
၁။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်လာအောင် အတင်း လုပ်ယူလို့မရပါဘူး၊ အတတ်နိုင်ဆုံးကတော့ သူတစ်ပါး အချစ်ခံရအောင်သာ နေတတ်ဖို့ပါပဲ။ ၂။ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ဂရုစိုက်ပါစေ လူတိုင်းဆီက ထပ်တူညီတဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ ပြန်မမျှော်လင့်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၃။ ယုံကြည်မှုဆိုတာကို အကြာကြီး တည်ဆောက်ရပေမယ့်လည်း တစ်စက္ကန့်လောက် အတွင်းမှာတင် ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ၄။ ဘယ်လောက်ပဲ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ပါစေ၊ တစ်ခါတစ်လေတော့ မိမိကို နာကျင်မှုလေးတွေ ပေးတတ်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ၅။ ဘဝမှာ ဘယ်လို အဆောင်အယောင်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ ဆိုတာထက် ဘယ်လိုလူတွေ အနားမှာ ရှိနေလဲ ဆိုတာက ပိုပြီး အရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ ၆။ တောင်းပန်ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုကို ဆင်ခြေတွေ၊ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မဖျက်ဆီးသင့်ပါဘူး။ ၇။ အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ […]
ခွေးတစ်ကောင်ဟာ မီးခဲကိုနင်းမိရင် ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ ဒါပဲ နောက်တစ်ကောင်ကထပ်နင်းမိလည်း ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ သူနင်းမိလို့ပူတဲ့ကိစ္စကို တစ်ခြားခွေးတွေကို မနင်းမိစေနဲ့ ပူတယ်လို့်မပြောနိုင်ဘူး သူ့အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ဘာသာစကားမရှိလို့ ကိုယ်တို်င်ဖြစ်မှ ကိုယ်တိုင်သိရတာ ကမ္ဘာဦးအစခွေးတွေကနေ ဒီနေ့ခွေးတွေအထိ ဂိန်! ပဲ တို့တစ်တွေလူတွေမှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ဘာသာစကားရှိတယ် မင်းတို့ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ပါးသူရဲ့ အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းလာတာ အမေဖြစ်သူက အဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ပူပူ အဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ဝေါ့ဝေါ့ မင်းကိုင်ပါဦးမလား မင်းအမေရဲ့ အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းမှုကြောင့် မင်း မီးကို အပူမှန်းသိသွားတယ် ဝေါ့ဝေါ့ဆိုတာကို ရွံစရာမှန်းသိသွားတယ် အောက်ဆီဂျင်ကို ခုချက်ခြင်း မင်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ မင်းရှာဖွေထုတ်နိုင်တယ် အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုမင်းရှာတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပညာရှင်က လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ မင်းချက်ခြင်းဖော်ထုတ်နိုင်တယ် […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 29/07/2018
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ် ။ မယားလုပ်တဲ့သူမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ် ။ အဲဒါကတော့ သူ့ကို ဘာပြောပြော “ဟုတ်လား — ကျွန်မအစကတည်းက ထင်တော့ထင်သားဘဲ” –ဆိုပြီး အမြဲ အဲသလိုပြောတတ်သတဲ့ ။ အဲဒါကို နေ့တိုင်းကြားနေရတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်တဲ့သူဟာ သူ့မိန်းမကို အမြင်ကပ်လာတယ် ။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့မှာ ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူဟာ လယ်တောကိုသွားပြီး…… အချိန်မတန်မီ နွားနှင်တံ ( နွားမောင်းရာတွင် နွားကိုရိုက်ရန်သုံးသောတုတ်) ကို ကိုင်ပြီး သူတစ်ယောက်ထဲပြန်လာတယ် ။ ဒါကိုမိန်းမကမြင်တော့ “ ဟော — ရှင်ဘာဖြစ်လို့ အိမ်ကိုအစောကြီးပြန်လာရတာလဲ ဒါနဲ့ လှည်းတွေ နွားတွေရော –“ “ အေးကွာ — မပြောကို မပြောချင်ပါဘူး — ငါတောရောက်လို့ လှည်းက နွားတွေကို […]
Posted in: ဟာသLeaveacommentMM Book City	 29/07/2018
၁။ အများနဲ့မတူ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အယူအဆတွေကို လက်ခံလို့ ဝေဖန်ခံရကောင်း ဝေဖန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ၂။ အတားအဆီးတွေ့ရင် ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ သူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို ဂရုစိုက်ရဦးမှာမို့ပါ။ ၃။ ခံစားချက်ဆိုတာ ဘဝအတွက်သိပ်အရေးမကြီးလို့ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ၄။ Facebook ဆိုတာ အကြောင်းအရာတော်တော်များများ ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ သင့်ဦးနှောက်က အမှိုက်ပုံးမဟုတ်လို့ အားလုံးကို လိုက်ပြီး ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ၅။ လူတွေက အောင်မြင်လည်းဝေဖန်မယ် မအောင်မြင်လည်းဝေဖန်မယ် ဘာမှမလုပ်လည်း ဝေဖန်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုထင်ထင်ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ၆။ ပတ်ဝန်းကျင်က သင့်မိသားစုစားစရာမရှိလို့ဆိုပြီး သင်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ အလကားတင်ကြွေးထားမယ့်သူ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ခေါင်းထဲထည့်ပြီး ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။ ၇။ သင့်မိတ်ဆွေရင်းတွေက တစ်ခါတရံ သင့်လုပ်ရပ်ကို လှောင်ပြောင်ကောင်း လှောင်ပြောင်လိမ့်မယ်။ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ တချို့သော မိတ်ဆွေရင်းတွေက […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 29/07/2018